Af soomaali (somaliska) Komponentåtgärdsmeny
Text somaliska Komponentåtgärdsmeny
Waxa aanu boggan kusoo uruurinay macluumaadka iyo adeegyada loogu talogalay dadka ku hadla af-soomaaliga.
Dalbo ballan telefoon oo af-somali ah
Waxa aad samaysan kartaa ballan telefoon si aad ula hadasho gacanyare (handläggare) kashaqeeya xaruntayada macaamiisha oo ku hadlaya af soomaali, wakhti adiga kugu haboon. Gacanyaruhu (handläggare) wuxuu ku siin doona warbixin la xidhiidha qaabka aad u dalban lahayd wixii kaalmo ah.
Si aad ballan u samaysankarto waxaad u baahantahay cinwaan iimayl. Marka aad ballan samaysato waxa laguu soo diri doonaa iimayl wata xidhiidhiye (länk). Xidhiidhiyaha riix dhawr daqiiqadood ka hor inta aanu bilaabmin wadahadalkaagu. Waad kula sheekaysan kartaa ama kula hadli kartaa maamulka (handläggare) kombuyuutarkaaga ama taleefanka. Hadii aanad xidhiidhiyaha riixin si aad u bilawdo wada hadalka, waxaanu badalkeeda kaasoo wici doona telefoonka aad qortay.
Booqo xafiiska adeega
Waxa jira xafiisyo adeeg oo ku yaala Iswiidhan oo dhan. Halkaas oo lagaa caawin karo su’aalaha ku saabsan Qasnadda caymiska (Försäkringskassan) iyo waliba hay’ado kale sida hay’adda cashuuraha (Skatteverket), hay’adda hawlgabka (Pensionsmyndigheten) iyo xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen).
Waxa tusaale ahaan lagaa caawin karaa wixii macluumaad ah iyo sida aad u isticmaali lahayn adeegyada internetka ee aad ku dalban karto gunno ama kaalmooyinka lacageed.
Hel meesha uu ku yaal xafiis adeeg (af iswiidhish)
Relaterade lankar somaliska Komponentåtgärdsmeny
Bogag la xiriira
Qofka ku cusub Iswiidhan
Dadka magangelyodoon ku ah Iswiidhan
Khasnada caymisku (Youtube.com)
Ma jirtaa inuu qof wax kuu geystay?
Waxaad xaq u leedahay nolol ka madax bannaan u gacan qaad
Shaqadeenna ku aaddan ka hortag u gacan qaadka
På den här sidan har vi samlat information och länkar till tjänster för dig som pratar somaliska.
Boka samtal på somaliska
Du kan boka ett samtal för att prata med en handläggare på vårt kundcenter som pratar somaliska, på en tid som passar dig. Handläggaren kan ge dig information hur du anmäler och ansöker om ersättningar.
Hitta ditt närmaste kontor (på svenska)
När du har sökt asyl i Sverige (somaliska)
När du har fått uppehållstillstånd i Sverige (somaliska)
Försäkringskassan på somaliska (Youtube.com)